That's so good, right?: အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပြ
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပြ
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေး၊ ပြုစုစောင့် ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များ အတူပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် အခြားအသိပေးတောင်းဆို လိုသည့် အချက်များကို အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုးကာပေးပို့ရန် ဖေဖော် ၀ါရီလ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် လှုမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်) ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်များက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသရေး၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့စည်း ၁၃၂ ခု ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက် တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ရက်ကနေ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပိုက်ဆံမထောက်ပံ့ပေးပါဘူး။ "လက်ရှိအခြေအနေရ ပြည်တွင်း လူမှုရေး အဖွဲ့စည်းတွေဟာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ တချို့သောဒေသ ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ အသိ အမှတ်ပြုမှုမခံရဘူး။ ခွင့်ပြုချက်မရဘူး။ အခုဆိုရင် မန္တလေးကအဖွဲ့က ဒါကို တင်ပြပေးတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့အဖွဲ့ တွေရပ်တည်ဖို့ ရန်ပုံငွေ အရမ်းနည်း တယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကွန်ရက်ကနေ တင်ပြတောင်းဆိုပေးသွားမှာပါ"ဟု ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆွေ က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအကြံပေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ကလည်း ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အစိုးရမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု မရရှိသေးသောကြောင့် လှုပ်ရှားရ ခက်နေကြောင်းနှင့် မကြာခင်တွင် တရားဝင်အဖွဲ့စည်းအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၅၈ ( ၂၄ ၊ ၂ - ၁ ၊ ၃၊ ၂၀၁၂)
မြန်မာတိုင်းမ် - အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ပြ
HIV positive ရှိသူများမှာ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံမှုများ ရှိလာ
HIV positive ရှိသူများမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထ်ိခိုက်မှုများကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံမှုများ ပိုမိုများပြားလာကျကြောင်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုးကူးစက်ခံရသူများ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုများ၊မိမိမိသားစုက ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခံကြခြင်းနှင့် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုများ၊ အပြင်အခြားစီးပွားရေး အခက်အခဲများကြောင့် ကိုယ့်ကို ကိုယ် သေကြောင်းကြံ မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“HIV ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေမှာလန့်ဖြန့် သွားကြတယ်၊HIV ရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားလာကြရင်ကို ရှက်တယ်၊ကြောက်တယ်၊ရွံ့တယ် ပြီးရင် ပတ်ဝန်းကျင် အထင်မြင်သေးခံရမှာ ကြောက် တယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ်ပယ်ခံရမှာကြောက်တယ်ဆိုတာတွေကြောင့် အဆုံးစီရင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ မှ တာဝန်ခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ နေ၀င်းကပြောသည်။
အချို့လူတွေမှာ သူသည်လူမမာ ဖြစ်သည်၊ နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မိသားစု အပေါ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်သည်ဟု ခံစားရသောကြောင့် အဆုံးစီရင်တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာနေ၀င်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။စိတ်ဖိစီးမှု့များ၊ ဆေးရုံ၏ဒုက္ခများ၊ HIV positive နှင့် နေထိုင်နည်းကို မသိသောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးချစ်ကိုကို ကလည်း သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“positive မှ negative မှ မဟုတ်ဘူး လူတိုင်းမှာ ဒုက္ခမျိုးစုံ ရှိနိုင်တယ် အဓိက care လုပ်မယ့်သူ ရှိရမယ် ဘယ်လို ရပ်တည်ရမယ် ဆိုတာသိရမယ် ဘယ်လိုသက်သာမယ်ဆိုသိရမယ် အဲဒါတွေ သိရင် ဒီလို ပြဿနာတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဟု ဦးချစ်ကိုကို ကဆိုသည်။ သွေးစစ်တော့မယ်ဆိုရင် သွေးမစစ်ခင် လူတိုင်းကကြိုတင် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း လုပ်ထားတဲ့အတွက် ပိုးရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ အဆိုပါ သေကြောင်းကြံမှုများ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးချစ်ကိုကို ပြောသည်။
HIV ပိုးရှိသူ၏ မိသားစု၊သူငယ်ချင်း၊ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သူများလဲ အသိပညာပေးဆွေနွေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊positive တယောက်အတွက် စိတ်ခံစားမှုက အရေးကြီးကြောင်း၊ မိမိတို့မှာရှိတဲ့ ပြဿနာ များကို ဖွင့်ပြော တိုင်ပင်လို့ ရတဲ့သူရှိပါက ၄င်းဖြစ်စဉ်များ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ HIV နဲ့ပတ်သက်၍ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၃၁၉၈၉၁၃ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရွှေမြစ်မခ - HIV positive ရှိသူများမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထ်ိခိုက်မှုများကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံမှုများ ရှိလာ
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံရသူများအား မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်တွင် အခမဲ့ကုသပေး
အေအာဗွီဆေးဝါးဖြင့် ကုသရန်လိုအပ်နေသည့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဝေဒနာရှင်များအား မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်တွင် အခမဲ့ဆေးကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း ကရုဏာလရိပ်အဖွဲ့(ရန်ကုန်)မှ သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင် ၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ အေအာဗွီ ဆေးတိုက်ကျွေးနေရတဲ့လူနာ ၁၄၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနဲ့ သာကေတ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း နေရာသုံးနေရာမှာ အေ အာဗွီဆေးတွေ ပေးပါတယ်။ လက်ရှိပထမအဆင့် ဆေးသောက်နေရတဲ့ လူနာ ၁၃၀ ကျော်ရှိပြီး ဒုတိယအဆင့် ဆေးသောက်နေရတဲ့လူနာ သုံးဦးရှိပါတယ်။ ဝေဒနာရှင်တွေလည်း ဆက်သွယ်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်'' ဟု ကရုဏာလရိပ်အဖွဲ့(ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ကရုဏာလရိပ်အဖွဲ့(ရန်ကုန်)သည် ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အသိပညာပေးရန်၊ ချို့တဲ့နွမ်းပါးသော ဝေဒနာရှင်များအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများပေးရန်၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်နေသူများအတွက် အသက်အရွယ်မရွေး ကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကရုဏာလရိပ်အဖွဲ့(ရန်ကုန်) အနေဖြင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီ အက်စ်ရောဂါ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အခွင့်အရေးယူဝင်ရောက် လာသည့်ရောဂါများကို စစ်ဆေးမှုနှင့် ကုသမှုခံယူနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အာဟာရ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေး နွေးပညာပေးခြင်းနှင့် သွေးစစ်ဆေးနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို အခမဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Eleven Media Group - အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကူးစက်ခံရသူများအား မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်တွင် အခမဲ့ကုသပေး
Posted by Alex Aung at 10:16 PM
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပိုမို...
Help! (Part Two)
Lesions on penis (၂) ကျားအင်္ဂါ အနာများ (၂)
အိဒ်စ်ရောဂါ ကုသရေး မျှော်လင့်ချက်သစ်
Modified Penis ပန်းအဖျား အဆန်းအပြားလုပ်ခြင်း